IINGCINGA ZETATTOO EZIHLOBO EZINGAMA-85 EZIHLOBO EZIPHEZULU- [ISIKHOKELO SIKA-2021 SOKHUTHAZO] - UHLOBO
Iingcinga zeTattoo eziHlobo ezingama-85 eziHlobo eziPhezulu- [Isikhokelo sika-2021 soKhuthazo]
Iitatoo zabahlobo abasenyongweni ngumboniso wokugqibela wokudibana, kunye nendlela entle yokukhumbula amava abalulekileyo okanye ubudlelwane.
Enye yezona zinto zilungileyo malunga ne-bff tattoo kukuba azikhawulelwanga nakusiphi na isitayile okanye indlela: ngokoqobo nantoni na enokusetyenziselwa ukukhumbula obu budlelwane bunamandla, okoko nje abahlobo bevumelana ngokubaluleka okwabelwana ngako kuyilo lwe tattoo olufanayo.
Abanye abantu bakhetha ukutshatisa umhlobo wabo osenyongweni ukuba abe yimfihlo, ngokubaluleka kokwenyani kuyabonakala kuphela kubahlobo ababhinqileyo ababelana nge-inki. Abanye abantu bayayithanda yobuhlobo babo i tattoo ukuba ibe ngokuthe ngqo ngakumbi.
Kukho inani leesimboli-ukuxhawula izandla, isithembiso sepinky, kunye nokuwela Utolo tattoo Uyilo luxhaphakile-olubonisa ngokucacileyo olu manyano lunamandla.
Nokuba yeyiphi na uyilo, uhambo olwabiweyo oluya kwindawo yokubhalela abanye abantu beqaqanjelwa ngumvambo, abanye babelana nge-inki kunye nokuphalaza igazi, yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlonipha ubuhlobo obenza ubomi bube nenjongo yokuphila.
1. Izimvo zeTattoo zezilwanyana ze-BFF
Umthombo: @cassienovah nge-Instagram
Umthombo: @ ianadams420_ink nge-Instagram
Umthombo: @ajaxmvrie_ nge-Instagram
Umthombo: @ bitten.ink.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @emilyrosetattoos nge-Instagram
Umthombo: @tashdeshmukhtattoos nge-Instagram
Umthombo: @safewordtattoos nge-Instagram
Umthombo: @laurabethlovekindnessempower nge-Instagram
Izilwanyana zenza ii-tatoo ezintle, zilula nje. Nokuba kunjalo tattoos elephants okanye ibhabhathane kukho into malunga nendlela abantu abanxibelelana ngayo nezilwanyana ezahlukeneyo ezenza ukuba ibe sisifundo esifanelekileyo somvambo wobuhlobo obufanayo.
Umsebenzi obonisiweyo kule galari ubonelela ngomnqamlezo omkhulu weendlela kunye neendlela ezinokusetyenziselwa uyilo lwezilwanyana: iinyosi ezimnyama nezimvi, intlanzi enemibala epheleleyo kunye nekhathuni lendlovu elibonisa ngokugqibeleleyo ukuba kutheni abantu abaninzi bekhetha ukukhumbula ubuhlobo babo Ukudibanisa imibono ye tattoo.
2. Uyilo oluMnyama lweTattoo yeeNgcaciso ze-BFF
Umthombo: @saby_demons nge-Instagram
Umthombo: @artkaylarose nge-Instagram
Umthombo: @ajmcguiretattoos nge-Instagram
Umthombo: @dowwnntherabbithole nge-Instagram
Umthombo: @i_blvn_kaident nge-Instagram
Umthombo: @ deoto1 nge-Instagram
Umvambo weinki omnyama Umsebenzi ubuyela umva yonke le ndlela yesiqalo sale nkcubeko yakudala, kwaye enkosi kumtsalane wayo ongaphantsi kwesi simbo sihlala sithandwa unanamhla. Ngelixa ngokuqinisekileyo kukho iikhonsepthi ezithile kunye noyilo olusebenza bhetele kusetyenziswa le ndlela, i-inki emnyama ayikhawulelwanga nakusiphi na isitayile esinye kwaye ezi ziqwenga zinomdla zibonisa oku kungahambelani.
I tattoo elula ye-anchor, iziporho ezidlalayo kunye nokuwela Uyilo lwe tattoo Zonke zenziwe ngokuchanekileyo kwaye ziqinisekile ukukhumbula obu buhlobo bubalulekileyo kwiminyaka ezayo.
3. Ikhathuni yoMhlobo oBalaseleyo woMvambo
Umthombo: @_shirazi nge-Instagram
Umthombo: @ redinkspecial_001 (igcisa) nge-Instagram
Umthombo: @mofoxxx (igcisa) nge-Instagram
Umthombo: @ liinnsan90 nge-Instagram
Umthombo: @ johnislandink nge-Instagram
Umthombo: atkatiechapmantattoos nge-Instagram
Umthombo: @jessica_fleischman nge-Instagram
Umthombo: @ marissa.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ megan_elisabeth01 nge-Instagram
Umthombo: @dany_tattooo nge-Instagram
Enye yezona ndawo zibalaseleyo yokuzoba ukhuthazo lokuthelekisa I tattoo yobuhlobo isuka kumava ekwabelwana ngawo. Kubantu abaninzi oopopayi abakhule bebukele babonelela ngezifundo ezifanelekileyo ngeyona inki yomhlobo ulungileyo.
Ngelixa uninzi lwezi ziqwenga zigqwesileyo ziphinda ziphinde ngokuthembekileyo kubalinganiswa bekhathuni njengoko zazivela kumabonwakude, ayisiyiyo kuphela indlela yokuyila. Njengoko uninzi lwezi ndlela zobuhlobo zetattoo zibonisa, ilayisensi yobugcisa ivumela umculi we tattoo ukuba abandakanye izinto ezahlukeneyo kwezi zoyilo-ukutolikwa kwenkululeko ngakumbi ngumdlalo olungileyo.
4. IiTattoos zabahlobo eziMibala
Umthombo: @justinbrowntattoo nge-Instagram
Umthombo: @ c.reneeallday nge-Instagram
Umthombo: @bloodyjupestattoo nge-Instagram
Umthombo: @flowwww nge-Instagram
Umthombo: @sfick_ nge-Instagram
Umthombo: @mschelsearose nge-Instagram
Umthombo: @brittachristiansen (igcisa) nge-Instagram
Abanye abantu ayikho nje enye indlela yokubamba ngokuchanekileyo isitayile sabo kunye neemvakalelo zabo ngaphandle kokusebenzisa imibala ebonakalayo. Iimpawu zobuhlobo kweli galari zibonisa iintlobo ezahlukeneyo zezindlela kunye neendlela, nangona zonke zisebenzisa iiphalethi eziqaqambileyo nezinemibala ukunceda umxholo wazo pop. Nokuba yindawo yokutshona kwelanga okanye i-cactus encinci eyonwabileyo, ngamanye amaxesha umbala kuphela kwendlela yokuhamba.
5. Inkcubeko yobuhlobo bokutya
Umthombo: @ major.arcana.tattoo.shop nge-Instagram
Umthombo: @luvnyanya nge-Instagram
Umthombo: @ vivienne.alexander nge-Instagram
Umthombo: @shaynatattoos nge-Instagram
Umthombo: @gerty_jane nge-Instagram
Umthombo: @ back.alley.emily nge-Instagram
Umthombo: @pickpokeuse nge-Instagram
Umthombo: @my_mishmashed_life nge-Instagram
Umthombo: @kbryanttattoos nge-Instagram
Umthombo: @ephanieeee nge-Instagram
Kwakhona sibona abantu bejonge kumava ekwabelwana ngawo ukwazisa uyilo abaludalelayo ukuze babonise iiTatoo zabahlobo babo. Ukutya esabelana ngako kunye neziselo esizisebenzisayo sisinye sezona ndlela zinamandla zokudibana nabahlobo kunye nosapho kwaye oku kwenza iitatoo zokutya zibeyindlela efanelekileyo yokukhumbula ngokusisigxina ubuhlobo obungapheliyo.
Ukusuka kumvambo entle wepitsa kunye nekhekhe esetyenziswe ngemibala eqaqambileyo, ukuya kumgca omnyama osebenza i-broccoli osusi wakhe okhuselayo uveza imifanekiso yeelografu, ukutya esikwabelanayo kuyasidibanisa.
6. Iqela labahlobo
Umthombo: @happygoodner nge-Instagram
Umthombo: @nightwing_slc nge-Instagram
Ubuhlobo abukhawulelwanga ngababini. Ngapha koko, xa kuziwa ebantwini abenza uncume, kokukhona kuya kudibana. Kungenxa yoko le nto abanye abantu bekhetha ukufumana i-tattoo yobuhlobo ehambelanayo neqela, bazise wonke umntu abadibana naye ukuba akukho kuqhekeka eli qela.
Ezi ziqwenga zithatha uyilo olulula kwaye zitshintshe into nganye kumntu ngamnye kwiqela: enye ithatha i-anchor tattoo esihlahleni kwaye itshintshe umbala wentliziyo, enye igcwalisa ngokutshintsha iitattoo zentliziyo ukuze umntu ngamnye abe noyilo olufanayo kodwa olwahlukileyo.
7. IiTattoos zabahlobo
Umthombo: @lewcid_ink nge-Instagram
Umthombo: @cjltattoo_ nge-Instagram
Umthombo: @inkbyace nge-Instagram
Umthombo: @will_raisen nge-Instagram
Umthombo: @randyblaze nge-Instagram
Umthombo: @allisonetattoo nge-Instagram
Umthombo: @albuquerquetattoos nge-Instagram
Umthombo: @ashleighhutchins_art nge-Instagram
Umthombo: @chasitychantae nge-Instagram
Umthombo: @ punkrock420 nge-Instagram
Umthombo: @tatutatu_inkclub nge-Instagram
Kuhlala kunika umdla ukubona umculi we tattoo eqhubeka nokwenza izinto ezintsha. Ezi tattoos ze-bff ezibalaseleyo azidanisi. Ezinye zeetattoo ezihambelanayo ziyachukumisa ngemigca yazo ethe tye kunye nokufiphaza ngokuchanekileyo ngelixa abanye besebenzisa iikhonsepthi ezingenakubonakala ngathi azikho ndawo kumzobo kaDalí ukukhumbula ubuhlobo.
Into abanayo bonke ngokufanayo yindlela yegcisa lobugcisa ezisebenzisa iinkcukacha zobungcali ukwenza esinye sesikhumbuzo sobubele kubuhlobo obenza ubomi bube mnandi kancinci.
8. Ubugcisa bomzimba bomzimba
Umthombo: @josspetrides nge-Instagram
Umthombo: @sweet_rebelqueen nge-Instagram
Umthombo: @lynn_ohara nge-Instagram
Umthombo: @ danna.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @kristinaturley nge-Instagram
Umthombo: @battytattoos nge-Instagram
Umthombo: @melosalazar nge-Instagram
Umthombo: @ savasava.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @minimaidtattoos nge-Instagram
Umthombo: @mobileinktattoos_ nge-Instagram
Umthombo: @nyctattooer nge-Instagram
I-Linework yeyona nto ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na itattoo eyimpumelelo kwaye ngaphandle kwemigca engaguquguqukiyo kwaye ichanekile nkqu eyona nto inyanzelisayo iya kusilela njengoko iguquka ngokuthe ngcembe ibe yibhl amorphous njengoko iminyaka idlula.
Ngapha koko, imigca ibaluleke kakhulu ekwenzeni umvambo ophumeleleyo kangangokuba abantu abaninzi baya bekhetha uyilo olutsiba umbala omnyama kunye nemibala ethandekayo endaweni yoko bavumele imigca ukuba izithethele. Ezi tattoos zigqwesileyo zibonisa le ndlela, kunye neepinki ezithembisayo zeetattoo eziyimizekelo ecocekileyo.
9. Imizekelo elula kunye neTattoo elula
Umthombo: @bettinaxnicol nge-Instagram
Umthombo: @martinagozzi___ nge-Instagram
Iingelosi kunye needemon uyilo lwetato
Umthombo: @sylviecatuhe nge-Instagram
Umthombo: @devillabeatrix nge-Instagram
Umthombo: @ laurendale22 nge-Instagram
Umthombo: @romelvistattoo nge-Instagram
Umthombo: @piaaart nge-Instagram
Ayinguye wonke umntu ofuna ii-tatoos ezandisiweyo ukubonisa ukubaluleka komhlobo ebomini babo. Kwabo bantu bafuna ukusebenzisa uthintelo kubugcisa babo bomzimba, ii-tattoos zabahlobo ezilula nezincinci lukhetho oluhle. Nokuba yeyiphi na indlela kunye nomxholo, itattoo entle inokubonisa ukuba kulula kangakanani ukubonakala.
10. Ilanga kunye neNyanga yokuTyhila
Umthombo: jesthebest nge-Instagram
Umthombo: @ inkedinthe906 nge-Instagram
Umthombo: @man_made_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @le_kat_cosplay nge-Instagram
Umthombo: @wildcorpseink nge-Instagram
Umthombo: @wildlingandflora nge-Instagram
Umthombo: @live_ya_life_tattoo_mg nge-Instagram
Ayizizo zonke izihlobo zabahlobo abasenyongweni abaziikopi zekhabhoni; Ngapha koko, obunye bobona buhlobo buhle buza ngendlela engalindelekanga, bebonisa uthando lwabo lweplato kwifashoni eyahlukileyo.
Kubahlobo abasenyongweni abayiqondayo into yokuba iyantlukwano yabo yiyo ebenza bahambelane, uyilo lwe tattoo olubalaselisa lo mahluko inokuba lolona khetho lufanelekileyo, kwaye yeyiphi indlela ebalaseleyo yokubamba obu budlelwane kunelanga kunye inyanga? Ezi ziqwenga zithatha iindlela ezahlukeneyo kwaye zisebenzise iindlela ezahlukeneyo kodwa zonke zibonisa ukuba ziphumelele njani iiTattoo zelanga kunye nenyanga ingayi.
11. I-Watercolor Tattoo Iingcamango zeBFF
Umthombo: @allenpaulson nge-Instagram
Umthombo: @ bert.prieto nge-Instagram
Umthombo: @ tattoos.by.dose nge-Instagram
Umthombo: Waterloo Iowa (igcisa)
Umthombo: @ maiko.kuphela nge-Instagram
Enye indlela yeetattoo eqhubeka nokufumana ukuthandwa isebenzisa imigca engqindilili kunye nokusetyenziswa okungafunekiyo kwemibala eqaqambileyo echithela kulwandlalo ukuphinda wenze isiphumo sepeyinti ye-watercolor. Kubantu abaninzi abakhule besebenzisa i-watercolor le yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhumbula abahlobo abakhona xa sibadinga kwaye basinceda ukuba sonwabele ubomi kancinane kancinci.
Umthombo: @tattoosbylucky nge-Instagram
Umthombo: @swayzieexpressbus nge-Instagram
Umthombo: @valknutqueen nge-Instagram
Umthombo: @black_rabbit_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @ahmedburnsred nge-Instagram
Umthombo: @goldenbeezzztattoo nge-Instagram
Ubuhlobo obuhle buvela ngokuhleka okwabelwana ngako kwaye kwabanye abantu ezi ziqhulo zangaphakathi kunye nobumnyama bokuhlekisa zibonelela ngogqibo olufanelekileyo lomvambo wobuhlobo. Nokuba kungumboniso omangalisayo ovela kwimovie kaTim Burton okanye umphambukeli wedayi, ngamanye amaxesha kuyamangalisa okusibambayo kunye kwaye ezi tattoos zibalaseleyo zibonisa ngokugqibeleleyo ukubaluleka kokuba nomhlobo owabelana nolwazelelelo lwakho olungaqhelekanga.
Eyona mibuzo iqhelekileyo yeeTattoos
Zeziphi iiTattoo ezimele ulwalamano?
Njengoko iitatto ezikule galari zibonisa, iitatoo zabahlobo abasenyongweni zinokuza kuyilo olwahlukileyo kwaye zigubungele naliphi na inani leekhonsepthi.
Ngaphakathi kuluntu lwe tattoo eyona nto ixhaphakileyo kwaye eyaziwayo kwangoko uyilo lobuhlobo zizandla ezibini ezingcangcazelisayo. Rhoqo kubhekiswa kuyo njengezandla zobuhlobo, olu luyilo lwamkelwe luthotho lweendlela nangona i-tattoo yavela kwisiko lesiqhelo laseMelika. Umahluko okwahlukileyo koku kukufunwa kwepinki okanye ityinki yesithembiso epinki, elula nje edityanisiweyo njengenxalenye yoyilo lwe tattoo ngesandla.
Olunye uyilo olufumene ukwamkelwa njengophawu lobuhlobo ziintolo ezimbini ezinqamlezileyo. Olu luyilo lubonisa ukuba abantu ababini bakwelinye icala kwaye ihlala isetyenziselwa ukufuzisela abazalwana ezingalweni. Ngelixa imvelaphi yokwenyani yolu phawu ilahlekile ixesha uninzi lucinga ukuba kukho ubudlelwane kwamanye amasiko amaMelika aseMelika.
Isithethe seCeltic-esaziwa ngemisebenzi yayo yamaqhina entsonkothileyo eye yakhuthazeka kakhulu kwiitattoos-inophawu lwayo lobuhlobo. Yaziwa njenge Claddagh Iringi, olu phawu lwase-Ireland luqulethwe zizandla ezibini ezibambe intliziyo apho isithsaba siphumla khona kwaye simele ubuhlobo, uthando kunye nokunyaniseka. Intliziyo ifanekisela uthando, ubuhlobo bezandla kunye nokunyaniseka kwesithsaba. Ngomlando osusela kwiminyaka ye-1700 ubuncinci, umsesane weCladdagh uyilo olunamandla - nokuba wenziwe itattoo encinci - enokufakwa kwiitatto zabahlobo abafanelekileyo.
Ukonwabele ukuyila i-bff tattoo? Ngaba ujonge ezinye izimvo zokufaka tattoo yakho yokuqala kunye nomhlobo? Cofa kwiikhonkco ezingezantsi ezinye zegalari ezipholileyo ukufaka isicelo kumhlobo we tattoo umbono:
Uyilo lweTattoo yentliziyo ye3D
Iingcamango eziphezulu ze-29 zeTattoo
Iingcamango eziphezulu ze-75 zeminwe yeTattoo Design
Iingcamango eziphezulu ze-73 ze-Ankle Tattoo
Phezulu kweTattoos ezingama-41 eziBalaseleyo
I-Koi Fish Yin kunye neYang Tattoo Designs
I-112 yeebhabhathane zoKhetho lweTattoo
Iingcamango zeTattoo Flower Tattoo Iingcamango
Ngaphakathi kuluntu lwe tattoo eyona nto ixhaphakileyo kwaye eyaziwayo kwangoko uyilo lobuhlobo zizandla ezibini ezingcangcazelisayo. Rhoqo kubhekiswa kuyo njengezandla zobuhlobo, olu luyilo lwamkelwe lininzi lweendlela nangona i-tattoo yavela kwisiko lesiqhelo laseMelika. Umahluko okwahlukileyo koku kukufunwa kwepinki okanye ityinki yesithembiso epinki, elula nje edityanisiweyo njengenxalenye yoyilo lwesandla.
Isithethe seCeltic-esaziwa ngemisebenzi yayo yamaqhina entsonkothileyo eye yakhuthazeka kakhulu kwiitattoos-inophawu lwayo lobuhlobo. Eyaziwa njengendandatho yeCladdagh, olu phawu lwaseIreland luqulethwe zizandla ezibini ezibambe intliziyo apho isithsaba siphumla kwaye simele ubuhlobo, uthando kunye nokunyaniseka. Intliziyo ifanekisela uthando, ubuhlobo bezandla kunye nokunyaniseka kwesithsaba. Ngomlando osusela kwiminyaka ye-1700 ubuncinci, umsesane weCladdagh uyilo olunamandla - nokuba wenziwe itattoo encinci - enokuthi ifakwe ekumataniseni iitatto zabahlobo abasenyongweni.
Inyibiba ye tattoo yentlambo
Utshintsho lomgangatho wethayile kunye nomthi
umqolomba womntu izimvo zebar esezantsi
ukukrazula iiTattoos zabafana